Gobolka Saaxil Oo Ka Talaabsaday Gobolka Sanaag Isla-Markaana U Gudbay Afar-Dhamaadka Gobolada JSL – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
1:04 am » Guuguulaha Maanta 12:41 am » Diyaarado Ka Soo Kacay Saldhigyada Djibouti Oo Duqaymo Ka Gaystay Deegaanada Gobalka Salal 12:40 am » Xildhibaan Baar Oo Cod Dheer Kaga Digtay Halista Sicir Bararku Ku Hayo Nolosha Dadka 12:35 am » Cali Khaliif Oo Furitaanka Distoorka Ku Tilmaamay Xudunta Wada Hadalada 12:34 am » Xog-waranka Hooyo Wiil Iyo Gabadh Ay Dhashay Ku Weyday Tahriibka Iyo Guurka Qaaliyoobay Oo Sabab U Ah Dhallinyarada Badda Isku Biimaysa Gobolka Saaxil Oo Ka Talaabsaday Gobolka Sanaag Isla-Markaana U Gudbay Afar-Dhamaadka Gobolada JSL Published on Nov 06 2016 // Ciyaaro Waxa shalay galabnimadii ciyaar aad loo wada sugayey dhex-martay xulka gobolka Saaxil iyo Gobolka Sanaag, waxaanay ahayd ciyaartii ugu dambeysay ee wareega sadexaad Groupka A, waxaanay ahayd kulanka lagu ogaanayey kooxda tagi doonta 4 dhamaadka koobka. Xulka gobolka Saaxil ayaana u baahnaa inuu badiyo, halkaas oo haddii xataa lala bar-barayn lahaa uu hadhaye, halka gobolka Sanaag uu raadinayey guushiisii koowaad ee koobka gobolada Somaliland.
Dhanka kale gobolka Xaysimo ayaa ka dharsugayey natiijada kulankan, isagoo lahaa 6 Dhibcood. Halka gobolka Awdal uu hore u soo baxay isagu.
Xulka gobolka Sanaag ayaa goolka koowaad ku hormaray kadib markii Kabtanka Sanaag Ee Siikaawi uu u gool u bedelay kubad xanaaqad ahayd oo loo dhigay, kaas oo ahaa mid aad u qurux badnaa, waxaanay natiijadu noqotay 1-0 ay Sanaag hogaanka ku hayso. Gobolka Saaxil ayaana ku dedaalay sidii ay u keeni lahaayeen goolka Barbaraha, waxaanay si dhakhso ah u dhaliyeen goolkooda barbaraha daqiiqadii 12-naad waxaana u saxeexay laacibkooda Nimcaan (Toronyo), waxaanay ciyaartu noqotay 1-1 barbar dhac ah.
Xamaasada ciyaarta ayaa noqotay mid si deg deg ah cirkaga iskugu shareertay, daqiiqadii 38-naad, gobolka saaxil ayaa weerar cajiib ah soo qaaday waxayna heleen fursad u muuqatay goolkooda labaad laakiin difaaca Sanaag ayaa kubbada gacanta ku celiyay iyada oo calanwaduhu uu tilmaamay khaladka uu difaaca Sanaag galay, waxaana go’aanka calanwadaha la qaatay garsooraha dhexe ee kulankan Garsoore Maax kaas oo Saaxil u dhigay rekoodhe.Wallow ciyaartoyda gobolka Sanaag ayaa ka cadhooday wuxuuna garsoore Maax uu hakad galiyay ciyaarta iyada oo ciyaartoyda Sanaag ay maamulkooda iyo tababaraha talo ugu laabteen waxaana ciyaartoyda Sanaag lagu qanciyay in wixii garsoorku qabtaa ay qasab ku tahay in la aqbalo waxaana rekoodhan Saaxil gool ugu sarifay Mustafe Saleebaan (Mustafe Messi) kaas oo ciyaartana ka dhigay 2-1 ay Saaxil hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Waxayna qaybtii hore ee ciyaartu ku dhamaatay 2-1 uu xulka gobolka saaxil hogaanka ciyaarta ku hayo. Markii laysku soo noqday ayaa markale gobolka Saaxil uu helay goolka saddexaad ee ay kalsoonida buuxda ku heleen isla markaana waxa si cajiib ah Daqiiqadii 61-naad ugu saxeexay Mustafe Saleebaan (Mustafe Messi) kaas oo goolkiisii labaad ee kulankan sidaa ku dhaliyay wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-1 ay Saaxil hogaanka ciyaarta ku sii dheeraystay.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 4 aad ee Mustafe Saleebaan (Mustafe Messi) uu ka dhaliyay saddexdii kulan ee uu saftay ciyaaraha sideed dhamaadka gobolada Somaliland wuxuuna la gool dhalin noqday Maxamed Maxamud Jaamac Engineerka oo isna 4-gool udhaliyay xulka gobolka Xaysimo.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Saaxil ku garaacday Sanaag isla markaana ay ugu soo baxday wareega afar dhamaadka ciyaaraha gobolada Somaliland iyada oo tirada goolasha kaga soo baxday Groupka-A.
Sida Loo Kala Sareeyey Groupka-A
1-Saaxil 3 kulan, 6 dhibcood iyo +5 gool, Waxay Kusoo Baxeen Kaalinta 1-aad Ee Groupkan.
2- Awdal 3 kulan, 6 dhibcood iyo +1 gool, Waxay Kusoo Baxeen Kaalinta Labaad Ee Group-A.
3- Xaysimo 3 kulan 6 dhibcood iyo -1 gool, Waxay Ku Hadheen Farqiga Goolasha iyadoo lagu yeeshay Hal Gool
4-Sanaag 3 kulan, 0 dhibic iyo -5 gool. Waa ay hadheen iyagoon wax guul ah ka gaadhin koobka Gobolada.